‘सधैं अरु सामु हात थापेर सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न सक्दैन’ – सुनिल प्रजापति – Bhaktapur Khabar
‘सधैं अरु सामु हात थापेर सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्न सक्दैन’ – सुनिल प्रजापति
२०७६ माघ १३ मंगलबार
By Bhaktapur Khabar	 Last updated Jan 28, 2020
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा अवस्थित छ । नेपालमा पटक पटक ठूला ठूला भूकम्पहरु गएको इतिहास छ । भूकम्पकै कारण नेपालले धरै ठूल ठूला क्षतिहरु व्यहोर्नु पर्‍यो । विगतका भूकम्पहरुले हामीलाई धेरै शिक्षा दिएर गए ।
भूकम्प स्वयं विपद् होइन, त्यो त प्राकृतिक प्रकृया मात्रै हो । आजसम्म विकसित वैज्ञानिक प्रविधिले भूकम्पलाई रोक्न सकेको छैन । अर्थात त्यस्तो कुनै प्रविधिको विकास भएको छैन । भूकम्पले होइन हामीले बनाएको कमजोर संरचनाले हाम्रा सम्पत्ति र हाम्रै ज्यान लिने गर्छन् । हामीले बलियो संरचना निर्माण गरेर भूकम्पबाट हुने क्षति न्युनीकरण गर्न सक्छौं हामी सबैको साझा सरोकारको विषय यही हो ।
भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरु निर्माण गर्नु र कुनै पनि बेला भूकम्प आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सावधानी अपनाउनु नै भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उत्तम उपायहरु हुन् ।
हाम्रा सैयौं वर्ष पुराना सम्पदाहरु अहिले पनि जिवन्त छन् । आजभन्दा ३१७ वर्ष अघि निर्मित काठमाडौं उपत्यकाकै सबैभन्दा अग्लो भक्तपुरको ५ तले मन्दिर १९९० सालको विनाशकारी भूकम्पमा १ तला मात्रै भत्क्यो, २०४५ सालमा केही क्षति भएन र २०७२ सालको भूकम्पमा १ तला विग्रयो । भक्तपुर नगरपालीकाले त्यसको जिर्णोध्दार गर्दैछ । भूकम्पअघि भनपाले जीर्णोद्धार गरेको ५५ झ्याले दरवारमा सामान्य क्षतिबाहेक केही भएन भैरवनाथको मन्दिरमा एक तल्लामा क्षति भएकोमा उक्त जीर्णोद्धार हालै सम्पन्न भयो । समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नु सम्पदा र संरचनाहरु राख्ने अर्को उपाय हो ।
गएको माघ २ गते २२ औं भुकम्प सुरक्षा दिवस मूल कार्यक्रम भक्तपुृरमा सम्पन्न भयो । भूकम्पबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले आयोजित त्यस कार्यक्रमले भक्तपुरको कला संस्कृति र सम्पदाबारे राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यस कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, सहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभाग, एनसेटलगायत सम्पूर्ण सहयोगी हातहरुलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छौं ।
भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ २ गते का दिन भु्कम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर भूकम्पसम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि राष्ट्रिय कार्यक्रमकै दिन भनपाद्वारा सञ्चालित ख्वप ई. कलेज र ख्वप कलेज अफ ईन्जिनियरिड्डको संयुक्त आयोजनामा जन चेतनामुलक प्रर्दशनी सम्पन्न गर्‍यौं भने माघ ३ गते राष्ट्रिय गोष्ठी सम्पन्न ग¥यौं ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि ख्वप ईन्जिनियरिङ्ग कलेज र ख्वप कलेज अफ ईन्जिनियरिड्डको आयोजनामा ‘भूकम्प ईन्जिनियरिङ्ग र विपद् पछिको पुनःनिर्माण’ विषयमा २०७३ साल बैशाख १२,१३, र १४ गते पहिलो र २०७६ बैशाख १२, १३ र १४ गते दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । विभिन्न देशका इन्जिनियर, आर्किटेक्टहरुले भाग लिनु भएको ती सम्मेलनहरुले पुनःनिर्माणमा मौलिक प्रविधिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
२०७२ सालको भूकम्पले भत्केका लाखौं घरहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । यो हामी सबैको साझा चुनौति हुन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारहरुले संयुक्त प्रयास गर्ने हो भने हाम्रा निजी घर र सम्पदाहरु पुनःनिर्माणको लागि त्यति समय लाग्ने छैन । कामभन्दा प्रकृया बढी खोज्ने, ढिलाइको कारणबारे एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रकृतिले हामीले आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गर्न सक्दैनौ । हाम्रो बानी, व्यवहारमा सुधार गरेनौं भने दुई वर्ष होइन अर्को चार–पाँच वर्षमा पनि पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्ने छैनौं ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यहीं कार्यक्रममा हुनुहुन्छ । गएको आ.व.मा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि भ.न.पा.लाई रु. ५ करोड पाउने उहा“बाट आश्वासन पायौं । उहाँहरुले योजना माग गर्नुभयो । वैशाख महिनामै योजना छनौट गरी ९ वटा योजनाको नक्सा डिजाइन, ल.ई. पारित गरी उपभोक्ता समिति गठनसहित कार्यपालिकाले पारित गरी बुझायौं । विभिन्न नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु, प्राविधिकहरुकोसामु उहाँले योजना स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । ताली बजाएर सहभागीहरुले समर्थन पनि गर्नुभयो तर २०७६ माघमा हामी सोध्दैछौं—ती योजनाहरु कहाँ गए ? ९ मध्ये २ वटा योजना हामीले नगरपालिकाको बजेटले नै सम्पन्न गरी सक्यौं ।
भक्तपुर दरवारक्षेत्र स्थित कला संग्रहालय रहेको भवनको कथा व्यथा त्यहीं छ । किन हाम्रा सम्पदाहरुमा जिम्मेवार निकायहरुको ध्यान जाँदैन ? त्यसको ल.इ., डिजाइनसहितको फाइल प्राधिकरणबाट हामीले नै पुरातत्व विभागमा पुर्‍यायौं, तर अझै काम हु“दैन । नेपालमा के गर्दा काम हुन्छ ? हामीलाई बुझाइ दिनु पर्‍यो ।
बैंकमा पैसा थुपारेर हाम्रा सम्पदाहरु आफै पुनःनिर्माण हुने होइन । निर्माणको अधिकार प्राप्त संस्थाहरु जति सकृय हुन्छन्, त्यति छिटो सम्पन्न हुने हो । हामी जनप्रतिनिधि ५ वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका हौं । अब पनि द्रुत गतिले काम गर्न सकेनौं भने हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ । आशा गरौं १ हामीले जिम्मेवारीपूर्वक बा“की काम छिट्टै टुड्डयाउने छौं ।
भ.न.पा.ले विश्व सम्पदा क्षेत्र, पुरानो नगरक्षेत्र, विस्तारित आवास क्ष्ँेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र नदी किनारा क्षेत्रको अलग अलग मापदण्ड बनाइ लागू गर्दै आएको छ । नगरभित्र अधिकतम तल्ला— ४५ फिट (५ तल्ला), विश्व सम्पदा क्ष्ँेत्रमा — ३५ फिट,पुरानो नगरमा — ३५ फिट र व्यापारिक क्षेत्रमा ५२ फिटको मापदण्डलाई भ.न.पा.ले कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ ।
जस्तोसुकै संकट आएपनि हामीले हाम्रो पहिचानलाई नर्बिसौं, मौलिकतालाई नगुमाऔं । हाम्रो पहिचान गुम्यो भने हाम्रो भन्नु केही हुने छैन । आत्मनिर्भरतालाई जोड देऔं । संधै अरुसामु हात थापेर ‘सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बन्न सक्दैनौं । आलोचनाले कमी कमजोरी सुधार्ने मौका मिल्छ ।
हामी प्रशंसाभन्दा आलोचनालाई ध्यान देऔं । आलोचना तितो औषधी जस्तै हो, जसले रोग निको पार्ने अचुक काम गर्छ ।
अन्त्यमा, सबैले आ—आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत होऔं । एक आपसमा हातेमालो गर्दै पुनःनिर्माणको काम समयमै सम्पन्न गरौं र संरचनाहरु बलियो, भरपर्दो र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गरौं । भविष्यमा आइपर्ने विपद् न्युनीकरण गर्न एकजुट होऔं । धन्यवाद ।
(२२ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा ललितपुरमा माघ १३ गते नेपालमा भुकम्पीय जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापन विषयक कार्यशालामा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त मन्तव्य )
भक्तपुर महोत्सव २०७६ मूल समारोह समितिको बैठक सम्पन्न
अरनिको सभाभवन निर्माणस्थल परिसरमा सरसफाइ